လန်ချန်း-မဲခေါင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု “ရွှေရောင် ၅ နှစ်” အသစ်ဖွင့်လှစ်ခြင်းအတွက် လန်ချန်း-မဲခေါင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အစည်းအဝေး ချုံချင့်တွင်ကျင်းပ - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင် ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ရိက ဇွန် ၈ ရက်တွင် ချုံချင့်၌ လန်ချန်း-မဲခေါင် (၆) ကြိမ်မြောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အစည်းအဝေးတွင် သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ချုံချင့် ၊ ဇွန် ၉ ရက် (ဆင်ဟွာ)
လန်ချန်း-မဲခေါင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု (၆) ကြိမ်မြောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေး ကို ဇွန် ၈ ရက်တွင် ချုံချင့်မြို့၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံနိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင် ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ရိ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင် တို့က အစည်းအဝေးတွင် ပူးတွဲ သဘာပတိအဖြစ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး လာအို ၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ ထိုင်း နှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့က အစည်းအဝေးကို အတူတကွ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ အစည်းအဝေးတွင် “စည်းလုံးညီညွတ်မှုဖြင့် ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်၍ ကပ်ရောဂါနောက်ပိုင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အတူတကွတွန်းအားပေးဆောင်ရွက်” ဟူသည့်ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး လန်ချန်း-မဲခေါင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏ တိုးတက်မှုများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြောင်း ၊ ၅ နှစ်တာကာလအတွင်း အတွေ့အကြုံများအား ခြုံငုံသုံးသပ်၍ နောက်တစ်ဆင့် အဓိကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ စီမံချက်များ ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ရိ က သမိုင်းစာမျက်နှာသစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန် အဆိုပြုခဲ့သည့် နီးကပ်မှု ၊ မှန်ကန်မှု ၊ မေတ္တာထားရှိမှု နှင့် သီးခံမှု ဟူသည့် အိမ်နီးချင်းပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံခြားရေး အတွေးအမြင်ကို ခိုင်မာစွာဆောင်ရွက်ပြီး မဲခေါင်မြစ်တစ်လျှောက် နိုင်ငံများနှင့် အတူ လန်ချန်း-မဲခေါင် နိုင်ငံများ အေးအတူပူအမျှ အသိုက်အဝန်းတည်ဆောက်ရေးကို ဦးတည်၍ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၊ နောက်တစ်ဆင့်တွင် ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ပိုမိုနက်ရှိုင်းစေရန် ၊ ကပ်ရောဂါနောက်ပိုင်း စီးပွားရေးပြန်လည်ကောင်းမွန်ရေးကို အတူတကွ တွန်းအားပေးဆောင်ရွက်ရန် ၊ ရေအရင်းအမြစ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးချဲ့သွားရန် ၊ ဒေသတွင်း လက်တွေ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို တွန်းအားပေးရန် ၊ ပြည်သူလူထုချင်း စိတ်နှလုံးသားချိတ်ဆက်မှုကို တိုးတက်စေရန် နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစနစ် ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် စသည့် လုပ်ငန်းစဉ် ၆ ခုကို အဓိကထားဆောင်ရွက်သွားကြရန် အကြံပြုလိုပြီး လန်ချန်း-မဲခေါင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏ “ ရွှေရောင် ၅ နှစ်” အသစ်ဖွင့်လှစ်ခြင်းအတွက် အကြံပြုကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခဲ့ကြသည့် နိုင်ငံအသီးသီး မှ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့က တရုတ်နိုင်ငံ ၏ လန်ချန်း-မဲခေါင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အပေါ် အလေးထားခြင်းနှင့် ဆောင်ရွက်ချက်များအပေါ် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ၊ အထူးသဖြင့် လန်ချန်း-မဲခေါင်း နိုင်ငံများ ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး နှင့် စီးပွားရေး ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေရေး အတွက် ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည့် စစ်မှန်သော ကူညီမှုများအပေါ် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ၊ တရုတ်နိုင်ငံ မှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဆက်လက်၍ အပြုသဘောဆောင်သည့် သက်ရောက်မှု ဆောင်ရွက်ပေးသွားရန် မျှော်လင့်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
အစည်းအဝေးတွင် 《လန်ချန်း-မဲခေါင် နိုင်ငံများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲကြေညာချက်》၊ 《လန်ချန်း-မဲခေါင် ဒေသတွင်း နိုင်ငံများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာ ဖော်ဆောင်မှု 》နှင့် 《လန်ချန်း-မဲခေါင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မူဘောင်အောက်တွင် တိုင်းရင်းဆေးပညာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပိုမိုနက်ရှိုင်းရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲကြေညာချက်》စသည့် သဘောတူညီချက်များကို ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
1. 6月8日，国务委员兼外长王毅在重庆主持澜沧江－湄公河合作第六次外长会。新华社记者 王全超 摄
2. 6月8日，国务委员兼外长王毅在重庆主持澜沧江－湄公河合作第六次外长会。新华社记者 王全超 摄